Aaska Suldaan Muuse Onkod oo maanta ka dhacay Magaalada Boosaaso – SBC
Aaska Suldaan Muuse Onkod oo maanta ka dhacay Magaalada Boosaaso
Posted by Webmaster on Febraayo 3, 2013 Comments
Waxaa maanta magaalada Boosaso xarunta gobolka Bari Aas qaran loogu sameeyay eebe ha u naxariistee Suldaan Muuse Faarax muuse oo loo yiqiin Muuse Onkod oo ka mid ahaa isimada Deegaanada Puntland kaas oo ay maalintii shalay dilay kooxo hubeysan.
Dadyow kala duwan oo isugu jira Cuqaal, Masuuliyiin, salaadiin iyo waxgarad kala duwan, waxaana halkaasi laga soo kala jeediyay hadalo ku aadan aaska .
Duqa Degmada Rako Faarax Maxamuud oo ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyay Taariikh nololeedkii Alaha u naxariistee Suldaan Muuse Onkod.
Waxa uu sheegay in uu suldaanku dhashay 1948dii uuna ku dhashay degmada Isku shuban, waxa uu intaasi raaciyay in uu ahaa nin Furfuran Geesi ah bulshaawi ah uuna isku darsaday in tii bini aadan ah ilaahey sinlahaa.
Cuqaal iyo siyaasiyiin ayaa sidoo kale aaska ka dib la hadlay saxaafada iyagoo dhamaantood soo jeediyay in dhiiga daatay aanu dhiig kale keenin loona duceeyo Marxuumka geeriyooday .
Sheekh Axmed Daahir oo ka mid ah Culimadda Puntland ayaa goobta ka sheegay in dilka Marxuumku noqon mid lagu fidnoobo uuna mudanyahay marxuumka in loo duceeyo .
Gen Maxamuud Muuse Xirsi Cade madaxweynihii hore Puntland oo isagana ka mid ahaa madaxdii ka qeyb gashay aaska ayaa ka hadlay Aaska Marxuumka isagoo sheegay in Marxuumku aha anin ka shaqeeya nabadda ayna muhiim tahay in aan loo daaday dhiig kale si markaasi loo ilaaliyo nabadda iyo Xasiloonida.
Wasiirka Wasaarada Amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan oo isagana meesha ka hadlay ayaa sheegay in dowladu ku raadjoogto gacan ku dhiiglihii falka dilka ah u geystay Suldaanka islamarkaana sida ugu macquuldan gacanta lagu soo dhigi doono waasida uu hadalka u dhigaye.
Dhamaan Waxgaradka Odayaasha Cuqaasha iyo weliba qeybaha kala duwan ee bulshadaba waxa ay halkaasi ugu soo jeediyeen Suldaanka Tacsi iyo duco.